कम्मर दुख्ने समस्या समाधान र अनुहारको दाग हटाउन कालो तिलको यसरी प्रयोग गर्नुहोस् कम्मर दुख्ने समस्या समाधान र अनुहारको दाग हटाउन कालो तिलको यसरी प्रयोग गर्नुहोस् Canada Nepal
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा ५० करोड लगानीमा मोडुलर ओटी सञ्चालन, निजीस्तरमा नेपालमै पहिलो
काठमाडौं । झापाको बिर्तामोड स्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले झन्डै ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको युरोपेली स्तरको अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटर (ओटी) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले निजीस्तरमा नेपालमै पहिलोपटक मोडुलर अपरेसन थिएटर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले दिएका छन् । आज एक कार्यक्रम मार्फत उक्त अपरेसन थिएटर संचालन मा ल्याईएको हो । अपरेसन थिएटरका लागि अस्पताल भवनको एउटा पूरै तला प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईं का अनुसार जर्मनीबाट ल्याइएको पाँचवटा मोडुलर अपरेसन थिएटर स्थापना र सञ्चालनका लागि झन्डै ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । उक्त थिएटर कुनै पनि संक्रमणबाट मुक्त रहने भएर ढोकाहरु सेन्सरबाट खुल्ने, बन्द हुने बनाइएको छ ।
कलेजो, फोक्सो प्रत्यारोपणको लागि मोडुलर थिएटर अत्यावश्यक पर्ने भएकाले अस्पताल ले उक्त थिएटर संचालन मा ल्याएको जनसम्पर्क तथा सूचना अधिकृत प्रमिस गिरीले बताएका छन् । अत्याधुनिक साधनसहितको मोडुलर अपरेसन थिएटर सञ्चालनमा आएपछि बिएन्डसी हस्पिटल र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल अंग प्रत्यारोपणका लागि आत्मनिर्भर भएको समेत गिरी ले उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले बिर्तामोडलाई मेडिकल टुरिजम को रुपमा विकास गर्दै लैजाने उद्देश्य रहेको सुनाए । उनले विदेशी मुलुकबाट पनि मिर्गौलालगायत अंग प्रत्यारोपणको लागि बिरामीको चाप बढ्ने विश्वास लिएको बताए ।
नेपालमा यसअघि सरकारीस्तरमा भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले कलेजो प्रत्यारोपणको लागि नेपालमै पहिलोपटक मोडुलर अपरेसन थिएटर सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
पौष २२, २०७८ बिहिवार १६:४६:४९ बजे : प्रकाशित
१० महिनादेखी खोरमा थुनिएका बालकको उद्दार गर्यो बिएन्डसी अस्पतालले
काठमाडौं । झापाको अर्जुनधारामा एक बालक महिनादेखि उपचारको अभावमा १० महिनादेखि काठको खोरमा बसिरहेका थिए । उक्त बालकको जानकारी पाएपछि बिर्तामोडको बिएन्डसी हस्पिटलले उनको घर पुगेर उद्दार गर्दै निःशूल्क उपचार गर्ने भएको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिका ४ मिलडाँडाका गुप्तबहादुर दाहालका ९ वर्षीय छोरा बसन्तको बिएन्डसीले निःशूल्क उपचार गर्न खोरबाट उद्दार गरेको हो । जन्मदेखि नै बोली नआएको बालकलाई गएको चैतदेखि खोरमा राख्न थालिएको परिवारले जनाएको छ ।
बिर्तामोडको बिएन्डसी हस्पिटलले उक्त बालकको निःशूल्क उपचार गर्ने भएको छ । शुक्रबार खोरबाट उद्दार गर्दै बिएन्डसी हस्पिटलले उपचार गरिदिन लगेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईं आफै पुगेर बालकको उद्दार गर्न सहयोग गरेका थिए ।
खेती किसानी गर्ने दाहाल परिवारलाई काम गर्न असहज भएपछि बाध्य भएर खोरमा राख्न थालिएको उनकी आमा चम्पा दाहालले सुनाइन् । छोराको उपचारका लागि सकेसम्म खर्च गरे पनि स्वास्थ्यमा केही सुधार नआएको उनको भनाइ छ । उपचारका लागि डाक्टरदेखि धामी झाँक्रीसम्म लगाएको पनि उनले सुनाइन् ।
लामो समयदेखि बालक खोरमा राखिँदा पनि राजनीतिकर्मी, समाजसेवीले केही पहल नगरेको भन्दै प्रसाईले रोष प्रकट गरे । उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको बिएन्डसीले उपचार गर्दै आएको बताउँदै त्यस्ता कोही व्यक्ति छन् भने खबर गर्न पनि गाउँलेलाई आग्रह गरे ।
‘यो छोरा तपाईको होइन, अब हाम्रो पनि छोरा हो, उपचार गरेर घर ल्याइदिन्छौँ ‘, बालकको परिवारलाई उनले आश्वस्त पारेका छन् । उनले भने, ‘कोही पनि पैसा नभएर उपचार पाएका छैनन् भने हामीलाई खबर गर्नुहोला ।’
पौष २३, २०७८ शुक्रवार १७:४५:३२ बजे : प्रकाशित
ओमिक्रोनको लक्षण कडा रुघाजस्तो देखिएको छ, संक्रमित भएमा के गर्ने ?
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीव्र ढंगले फैलिदै गएको छ । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ ।
उच्चदरमा फैलिएको ओमिक्रोन बारे अहिले धेरैलाई जान्ने इच्छा छ । यसैबीच डा. रवीन्द्र पाण्डेले ओमिक्रोन संक्रमित भएमा के उपाय अपनाउने भन्ने बारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
अहिले डेल्टा, ओमिक्रोनलगायत कोरोना भाइरसका प्रजाति नेपालमा पनि उच्चदरमा फैलिएको छ । अन्य देशको संक्रमणदर हेर्ने हो भने नेपालमा पनि यसको फैलावट ठूलो समुदायमा हुनसक्दछ । यसको प्रकोप हेर्दा लाग्छ, हामी सबै कोरोनाबाट अछुतो रहन मुस्किल छ । सुखद कुरा के छ भने यो लहरका प्रजातिले त्यति गम्भीर बनाएका छैनन् । ओमिक्रोनको लक्षण कडा रुघाजस्तो देखिएको छ ।
१. कडा रुघा वा जीउ दुख्ने र जाडो हुने भएमा तत्काल पिसिआर टेस्ट गर्ने । रोग थाहा पाउनु भनेको उपचारको बाटो क्लियर हुनु हो ।
२. पिसिआर पोजिटिभ देखिएमा डर नमान्ने र पटक्कै नआत्तिने। खोप लगाएका व्यक्तिमा सामान्य लक्षण देखिएर निको हुन्छ ।
३. बिभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्, कोभिडमा घरेलु उपचार प्रभावकारी छ । बेसार, अदुवा, ज्वानो, मरिच, तुलसीका पात तथा कागतीपानी पकाएर पटकपटक सेवन गर्ने र मनतातो पानी प्रशस्त मात्रामा पटकपटक पिउने ।
४. पोषिलो तथा बिबिध प्रकारका खाना खाने । जंक फुड नखाने । चिसो बाहेक अन्य खाना बार्नु पर्दैन ।
५.इम्युनो प्लस, इम्युन केयर, इम्युनोभिर लगायतका हर्बल औषधि (रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने) आयुर्वेद चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मिको सल्लाहमा सेवन गर्ने ।
६. ज्वरो आएमा र टाउको दुखेमा र शरीर दुखेमा पारासिटामोल, खोकी लागेमा एलर्जीको ट्याब्लेट र कफ सिरप, नाक बन्द भएमा न्याजल ड्रप आदिको प्रयोग गर्ने । घांटी दुखेमा गार्गल सोलुसनले पटकपटक कुल्ला गर्ने ।
७. घाम ताप्ने, हल्का ब्यायाम गर्ने, योग गर्ने, ध्यान गर्ने, भेन्टिलेसन पर्याप्त भएको ठाउँमा बस्ने तथा सकारात्मक सोंच राख्ने । ८. अक्सिमिटरले अक्सिजन नापिरहने ।
९. घांटी धेरै दुखेमा, सामान्य उपचारले खोकी वा ज्वरो निको नभएमा चिकित्सकको सुझाब अनुसार एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने ।
१०. अक्सिजनको स्तर घटेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा, खान खान नसकेमा तथा अन्य गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पतालमा जाने ।
माघ २, २०७८ आइतवार २१:३०:४७ बजे : प्रकाशित
भुलेर पनि नफ्याँक्नुस् चौलानी पानी, यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाइदा
काठमाडौं - हामिहरुले खाना पकाउनुअघि चामललाई पखालेर फ्याकिने पानीलाई चौलानी पानी भन्ने गरिन्छ । धेरैले चौलानी पानीको फाइदा बारे थाहाँ नहुँदै त्यसै फ्याक्ने गर्छन् । तर हामिले फ्याक्ने गरेको चौलानी पानी निकै उपयोगी छ ।
दिनहुँ फ्याकिने चौलानी पानी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ । भारतीय नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ आयुर्वेदका डा. ओ.पी. दाधीचले चौलानी निकै उपयोगी हुने बताएका छन् । चौलानीमा कार्बोहाइड्रेड र अमिनो एसिड प्रशस्त पाइन्छ । एक गिलास चौलानी पानीमा अलिकति मह राखेर पिउने गरेमा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ ।
रक्तचाप नियन्त्रण - चौलानी पानीको सेवन गरेमा रक्तचापको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यो दिनदिनै एक गिलास पिएमा उच्च रक्तचापमा फाइदा गर्छ ।
छाला सफा र चम्किलो - शरिरलाई उर्जा दिने यो पानीले अनुहारका विभिन्न समस्या पनि समाधान गर्छ । चामलको पानीले मुख धोएमा छाला सफा र चम्किलो हुन्छ । त्यस्तै डण्डीफोर, दाग धब्बा पनि आउन दिदैन । चामलको पानीले सुत्नुअघि आँखाको वरीपरी लगाएमा आँखामा चमक आउछ ।
शरीरमा पानीको कमी हुन नदिने - चौलानी पानीको पिउने गरेमा शरीरमा पानीको कमी पनि हुँदैन । यसले सबै आवश्यक पोषक पदार्थ दिने गर्छ । त्यसैले यसमा दुध मिसाएर खानु पनि राम्रो हुन्छ ।
कपालको समस्या समाधान - चौलानी पानीले कपालको समस्या पनि समाधान गर्छ । यदि कपाल झर्ने समस्या छ भने पिउँदा वा त्यसले कपाल नुहाउँदा कपाल झर्दैन । यसले कपालको जरा बलियो बनाउने गर्छ ।
हाड बलियो - चौलानी पानी नियमित पिउने गरेमा हाड बलियो हुन्छ । आधा गिलास चौलानी र आधा गिलास दूध मिसाएर पिउँदा हाड बलियो हुने गर्छ ।
पाचन प्रक्रिया - दिनहुँ चौलानी पानी पिउने गरेमा पाचन प्रक्रिया पनि राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा पेटका असल ब्याक्टेरियाहरू सक्रिय हुन्छन् र पाचन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँछ । यसको सेवनले पानीको कमी हुन नदिई कब्जियतको समस्या पनि समधान गर्छ ।
तौल घटाउँछ - चौलानी पानी नियमित सेवन गरेमा मेटाबोलिजम बढ्छ । यसमा फाइबर भरपूर हुनाले भोक पनि लाग्दैन । जसले तौल घट्छ । बान्ता हुने समस्या छ भने पनि यसको सेवनले समाधान गर्छ ।
माघ ९, २०७८ आइतवार २१:१०:२५ बजे : प्रकाशित
हृदयरोगबाट बच्न यी ६ आदत बसाल्नुहोस्
काठमाडौं - विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार, अमेरिकामा प्रत्येक चारमध्ये एक मृत्युको कारण हार्टअट्याक हुने गरेको छ । यसको विश्व आँकडाले मुटुसँग जोडिएका रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिने पनि प्रमाणित गरेको छ ।
कार्डियोलोजिस्टहरुका अनुसार, हृदयरोगबाट बच्न स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, स्तरीय निद्रा र समय समयमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन सक्दा रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विज्ञ चिकित्सकहरु हृदयरोगबाट बच्न यी ६ उपाय सुझाउँछन् -
माघ ११, २०७८ मंगलवार १४:३९:२७ बजे : प्रकाशित